အမေရိကန်နှင့် တရုတ်တို့ရဲ့ လေတပ်အင်အားကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ခြင်း ( တကယ်တမ်း ယှဉ်ကြည့်လိုက်တော့ ယုဇနာ တသိန်းလောက်ကွာနေတယ် …..တကယ်ဖြစ်လာရင် သာကောတို့မလွယ်….)
အမေရိကန်နှင့် တရုတ်တို့ရဲ့ လေတပ်အင်အားကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ခြင်း ( တကယ်တမ်း ယှဉ်ကြည့်လိုက်တော့ ယုဇနာ တသိန်းလောက်ကွာနေတယ် …..တကယ်ဖြစ်လာရင် သာကောတို့မလွယ်….) ယခုတလော နိုင်ငံရေး အရ အ‌ခြေအနေတင်းမာနေသည်ယူအက်စ်နဲ့ တရုတ်တို့ရဲ့ လေတပ်အင်အားကို Global Fire Powerစစ်တမ်းကောက်ချက်များအား နယှဉ် ပြလိုက်ရပါသည်။ နိုင်ငံတစ်ခု၏ လေတပ်အင်အားကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရာတွင် ပါဝင်သော လေယာဉ် အမျိုးအစားများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ 1. တိုက်လေယာဉ်များ ( Fighter Jet ) 2.ဗုံးကြဲလေယာဉ် (bombers and ground-attackers) / 3.သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ် (Transport Aircraft ) / 4. အထူးမစ်ရှင်လေယာဉ် (Special-Mission Aircraft) / …
ကာရေဂါက လီဗာပူးဟာ ချန်ပီယံဆု ကာကွယ်ဖို့အတွက် အသင့်ဖြစ်နေပြီလို့ ဆို နည်းပြကြီး ကလော့ပ်ကတော့ အဲဒီပြောဆိုမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပယ်ချ
ကာရေဂါက လီဗာပူးဟာ ချန်ပီယံဆု ကာကွယ်ဖို့အတွက် အသင့်ဖြစ်နေပြီလို့ ဆို နည်းပြကြီး ကလော့ပ်ကတော့ အဲဒီပြောဆိုမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပယ်ချ ကလော့ပ်ရဲ့လီဗာပူးဟာရာသီအဖွင့်ပွဲစဉ်မှာ လိဒ်ယူနိုက်တက်ကို အပြန်အလှန်သွင်းဂိုးတွေ နဲ့ အနိုင်ရရှိခဲ့ပေမယ့် ၊ အဲဒီနောက်ပိုင်း ကစားခဲ့တဲ့ နှစ်ပွဲမှာတော့ တည်ငြိမ်တဲ့ ခြေစွမ်းတွေ နဲ့ အနိုင်ယူ ပြလိုက်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဒီရာသီမှာ ပေါင်သန်း200ကျော်အထိ သုံးစွဲဖြည့်တင်းထားတဲ့ ချဲဆီးကို အဝေးကွင်းမှာ အနိုင်ယူပြခဲ့တာ၊ဖလား 2လုံးဆက်တိုက် ဆွတ်ခူးပြထားတဲ့ အာဆင်နယ်ကို မနေ့ညက အနိုင်ကစားပြခဲ့တာတွေဟာ ချန်ပီယံ ခြေစွမ်းကို ဖော်ပြနေတယ်လို့ ညွှန်းဆိုချင်ဟန် တူပါတယ်။ တဆက်တည်းမှာပဲ ကာရေဂါ က လီဗာပူးဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံးရာသီ အကုန်မှာ စောစောစီးစီး …
နိုင်ပွဲဆက်နေတဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ထိပ်သီး နှစ်သင်းရဲ့ ဆုံတွေ့မှုမှာ အာဆင်နယ် ရှုံးပွဲတွေ့
နိုင်ပွဲဆက်နေတဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ထိပ်သီး နှစ်သင်းရဲ့ ဆုံတွေ့မှုမှာ အာဆင်နယ် ရှုံးပွဲတွေ့ လီဗာပူးလ် ၃-၁ အာဆင်နယ် နိုင်ပွဲဆက်နေတဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ထိပ်သီး နှစ်သင်းရဲ့ ဆုံတွေ့မှုမှာ လက်ရှိချန်ပီယံ လီဗာပူးလ်အသင်းက ဂိုးပြတ် နိုင်ပွဲ ရယူပြီး ရာနှုန်းပြည့် နိုင်ပွဲ ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ လီဗာပူးလ်က အာဆင်နယ်ကို အဖက်ဖက်မှာ အသာစီးယူပြီး လွယ်လွယ်ကူကူ အနိုင်ယူ သွားခဲ့ခြင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ လီဗာပူးလ်အသင်းမှာ ဟန်ဒါဆန်ကလွဲရင် လူစုံခဲ့သလို၊ အာဆင်နယ် အသင်းကလည်း အင်အား အပြည့်ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ပွဲစတာနဲ့ လီဗာပူးလ်အသင်းက စိတ်ကြိုက် တိုက်စစ်ဆင် ကစားသွားနိုင်ခဲ့ပြီး ဂိုးကန်သွင်းခွင့်ပေါင်း များစွာနဲ့ အာဆင်နယ်အသင်းကို ဖိအားပေးခဲ့ပါတယ်။ လီဗာပူးလ်အသင်းရဲ့ ခံစစ်ပိုင်းကတော့ …
ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ် -၃ ပွဲကြိုသုံးသပ်ချက်
ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ် -၃ ပွဲကြိုသုံးသပ်ချက် ဖူလ်ဟမ် – အက်စတွန်ဗီလာ (မြန်မာစံတော်ချိန် စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက် ည ၁၁း ၃၀ နာရီ) ဖူလ်ဟမ်က အာဆင်နယ်ကို ဂိုးပြတ်ရှုံးတဲ့ ပွဲမှာ ကစားပုံ မညံ့သလို၊ လိဒ်စ်နဲ့ ပွဲမှာလည်း မဆိုးဘူး။ ပြဿနာက ခံစစ်မှာ ရှိပြီး တိုက်စစ်က တိုးအား၊ ရုန်းအား မဆိုးဘူးလို့ ပြောလို့ ရတယ်။ ဗီလာကတော့ ရှက်ဖီးယူနိုက်တက်နဲ့ ပွဲမှာ စိတ်ကြိုက်ကို ကစားခဲ့တာပါ။ အခွင့်အရေး ဖန်တီးမှုပေါင်း များစွာ ရခဲ့တယ်။ ဒီလို အခွင့်အရေးတွေ ထပ်ရ၊ မရ မသေချာပေမယ့် အဲဒီပွဲကလို ဖြုန်းတီး နေရင်တော့ ဖူလ်ဟမ် …
အငြင်းပွားဖွယ် နောက်ကျ ပင်နယ်တီ ပေးခဲ့ရတဲ့ အပေါ် လှလှပပ တုန့်ပြန်လိုက်တဲ့ မော်ရင်ဟို
အငြင်းပွားဖွယ် နောက်ကျ ပင်နယ်တီ ပေးခဲ့ရတဲ့ အပေါ် လှလှပပ တုန့်ပြန်လိုက်တဲ့ မော်ရင်ဟို မနေ့ညက ယှဉ်ပြိုင် ကစားခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ် (၃) မှာ တော့တင်ဟမ် အသင်းဟာ ဒီရာသီ အိမ်ကွင်း ပထမဆုံး နိုင်ပွဲ နဲ့ Clean-Sheet ရဖို့ နီးစပ် နေခါမှ ပွဲပြီးခါနီး ပေးလိုက်ရတဲ့ ပင်နယ်တီကြောင့် သရေ တစ်မှတ်သာ ရရှိ သွားခဲ့ရပါတယ် ။တော့တင်ဟမ် အသင်းဟာ လူးကပ်စ် မော်ရာ ရဲ့ သွင်းဂိုး နဲ့ ပွဲကို ဦးဆောင် နိုင်ခဲ့ပြီး ဂိုးပေါက် ကန်သွင်းမှုတွေ အများအပြား လုပ်နိုင် ခဲ့ပေမယ့် နယူးကာဆယ် ဂိုးသမား …
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် နဲ့ပွဲမှာ မထင်မှတ်ဘဲ CR7 ရဲ့ စံချိန်ကို လိုက်မီသွားခဲ့တဲ့ ဘရိုက်တန်လူငယ်လေး
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် နဲ့ပွဲမှာ မထင်မှတ်ဘဲ CR7 ရဲ့ စံချိန်ကို လိုက်မီသွားခဲ့တဲ့ ဘရိုက်တန်လူငယ်လေး မန်ချက် စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ဟာ ယမန်နေ့ က ဘရိုက်တန် အသင်း ရဲ့ ကွင်းကို သွားရောက် ကစား ခဲ့ပြီး ၃-၂ နဲ့ အနိုင် ရခဲ့ ပါတယ် ။ အိမ်ရှင် ဘရိုက်တန် ဟာ ယူနိုက်တက် ကို အသာစီး နဲ့ ကစား ခဲ့ပြီး ဂိုးသွင်း ခွင့် ၊ ဂိုးပေါက် ကန်ချက် နဲ့ ဘောလုံး ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ မှာ အသာရ ခဲ့ ပါတယ် …
ယူနိုက်တက် အနိုင် သုံးမှတ်နဲ့ မထိုက်တန်ခဲ့ကြောင်း ဝန်ခံလိုက်တဲ့ အသင်း မန်နေဂျာ ဆိုးရှား
ယူနိုက်တက် အနိုင် သုံးမှတ်နဲ့ မထိုက်တန်ခဲ့ကြောင်း ဝန်ခံလိုက်တဲ့ အသင်း မန်နေဂျာ ဆိုးရှား မန်ချက်စတာ အသင်း မန်နေဂျာ ဆိုးရှားကတော့ ညက ဘရိုက်တန်နဲ့ ပွဲမှာ ယူနိုက်တက်က ကံကောင်းလို့ လွတ်မြောက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး အနိုင် သုံးမှတ်နဲ့ မထိုက်တန်ခဲ့ကြောင်း ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ ယူနိုက်တက်ဟာ ပွဲချိန် အပြီး နာကျင်အချိန်ပို ၉၅ မိနစ်ထိ ၂-၁ နဲ့ ဦးဆောင်ခဲ့ပေမယ့် မထင်မှတ်ဘဲ ချေပဂိုး ပြန်ပေးလိုက်ရတာကြောင့် ၂ ဂိုးစီ သရေရလဒ်နဲ့ ပွဲပြီးဆုံးပြီ ထင်ခဲ့ကြတာပါ။ ဒါပေမယ့် ပွဲပြီး ခရာမှုတ်ပြီးချိန်မှ မူပေးရဲ့ လက်ထိဘောကို VAR ပြန်ကြည့်ကာ ပင်နယ်တီ သတ်မှတ်ပေးကာ ကန်သွင်းခွင့် …
အာတီတာ က နီကိုလပ်စ် ပေပေ ဟာ အမြင့်ဆုံး စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပြသ နိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ကြောင်း ပြောကြား သွားခဲ့
အာတီတာ က နီကိုလပ်စ် ပေပေ ဟာ အမြင့်ဆုံး စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပြသ နိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ကြောင်း ပြောကြား သွားခဲ့ အာဆင်နယ် အသင်း နည်းပြ မီခေးလ် အာတီတာ က အသင်းရဲ့ ကလပ် စံချိန်တင် ပြောင်းရွှေ့ကြေးရှင် နီကိုလပ်စ် ပေပေ ဟာ တိုးတက်နေတဲ့ အလားအလာ ကို ပြသထားနိုင်ပြီး အမြင့်ဆုံး စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပြသ နိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ကြောင်း ပြောကြား သွားခဲ့ပါတယ် ။ အိုင်ဗရီကိုစ့် လက်ရွေးစင် နီကိုလပ်စ် ပေပေ ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် နွေရာသီ အပြောင်းအရွှေ့ကာလမှာ လိုင်လီ အသင်းကနေ အာဆင်နယ် အသင်းကို ပြောင်းရွှေ့ကြေး …
ကမ္ဘာပျက်တာလား ကပ်ဆိုက်တာလား ?
ကမ္ဘာပျက်တာလား ကပ်ဆိုက်တာလား ? ခုခေတ်လူတွေ မယုံမရှိကြနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ၂၆၀၀ကျော်က မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ တရားတော်တွေဟာ ယနေ့ခေတ်လူတွေနဲ့ ကိုက်ညီနေတယ်.. အခုခေတ်လူတွေဟာ ကြမ်းတမ်းလာတယ်.. ရုပ်ဝတ္ထုတွေ အထွဋ်အထိပ်ရောက်လာတယ်.. အဏုမြူလက်နက်တွေ တိုးပွားနေတယ်.. ခါးသီးတဲ့အမုန်းတရားတွေ ပွားများလာကြတယ်.. မြတ်စွာဘုရားက ဟောထားတယ် “တိတ္ထောအာဂတော”တဲ့..Terrorismဆိုတာ ခါးသီးတဲ့ အမုန်းတရားကြောင့် ဖြစ်လာတာမျိုးတဲ့.. တိန္နာနိ – အစွမ်းထက်ကုန်သော… သတ္တာနိ- လက်နက်တို့ကို… ဂိတွာ – စွဲကိုင်၍ တိုက်ခိုက်လာကြလိမ့်မယ်.. အဲဒီစစ်ပွဲကြီးမှာ ၇ ရက်အတွင်း လူတွေ သေကြေပြီး လူတွေကုန်သလောက် ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်.. စိတ်ကောင်းရှိသူ လူအနည်းငယ်သာ ကျန်ခဲ့လိမ့်မယ်.. ကျန်ခဲ့တဲ့သူတွေဟာ အချင်းချင်း ပြန်ဆုံဆည်းတဲ့အခါ “မသေလို့ တွေ့ကြတယ်”ဆိုပြီး ဖက်ပြီး ငိုကြလိမ့်မယ်.. …